Tabaha loo sameeyo Faraska cambarkiisa oo ifaya | Fardaha Noti
Tabaha lagu sameeyo faraska maankiisa oo ifaya
Monica Sanchez | | Xeryaha
Faraska waxaa suuragal ah inuu kamid yahay xubnaha boqortooyada xayawaanka ee gudbiya quruxda iyo xarrago badan. Hiddeheeda sharafta leh ayaa bini-aadamka ka dhigay jacayl tan iyo weligiis. Waxaa jira noocyo fara badan oo kala duwan, oo qaabdhismeedkoodu u kala duwanaan karo midba midka kale, taas oo macnaheedu yahay in mid kasta oo ka mid ah abuureyaasha ama kuwa jecel sinnaanta ay ku sasabto noocyo gaar ah, mid kastaana ka sharaf badan. Waxa ay dhammaan kuwa ku lugta leh adduunka farasku ku heshiiyaan waa in qayb weyn oo ka mid ah sirta ilaahnimada xayawaankan ay ku nooshahay dhogorteeda: manjo iyo dabada.
Mashiinka dhalaalaya iyo dabada ayaa calaamad u ah caafimaadka, sidaa darteed, mid ka mid ah welwelka weyn ayaa ah: Sidee loo siiyaa dhalaalkaas dabeecadda ah?
1 Maxaa faras faraskiisa loogu talagalay?
2 Cadayashada maalinlaha ah
4 Daawooyinka guriga si aad faraska uga dhigto mid dhalaalaya
4.1 Isku darka saliida
4.2 Tufaax cider tufaax
4.3 Diyaarinta saliida macdanta
5 Sida loo koraan faraska
6 Xagee laga iibsadaa faraska dhogorta
Maxaa faras faraskiisa loogu talagalay?
Xayawaankani wuxuu leeyahay mawaadin hal sabab ugu weyn: si looga baqo cayayaanka intee bay kugu dhibi karaan. Sidaa darteed, haddii aad aragto in sinnaantaadu ay dhaqaajineyso dhaqdhaqaaqa madaxa iyo qoorta oo sameyneysa dhaqdhaqaaqyo lama filaan ah, hubaal waxaad u baahan tahay inaad dhigto xoogaa antiparasitic 🙂.
Sababta kale ee suurtogalka ah ayaa ah in xoogaa difaac ah la helo inta lagu jiro dagaalka, maaddaama ugaarsadayaasha dabiiciga ah (felines, canines) ay badanaa weeraraan qoorta marka hore. Markasta oo timaha maanku aad u bataan, ayaa fursadaha badan ee sinnaan u yeelan doontaa inuu is badbaadiyo.
Cadayashada maalinlaha ah
Xayawaan kasta oo is-ixtiraama wuxuu u baahan yahay daryeel iyo daryeel maalinle ah, faraskuna ma yaraan doono. Daryeelkaas waxaa ka mid ah cadayasho. Labada man iyo dabada iyo, sidaa darteed, dhogorta xayawaanka guud ahaan, waa inay si ficil ah loo cadaadiyo maalin kasta, gaar ahaan haddii faraskeennu dhowr saacadood dibadda ku qaato. Sidan oo kale, waxaan ka takhalusi doonnaa walxaha wasakheeya timaha, sida boodhka, dhoobada iyo dulinku, waxaanuna u oggolaan doonnaa in maqaarkaagu si sax ah u neefsado iyadoo la soo saarayo saliidiisa iyo waxyaabaha la midka ah ee dhalaalaya
Khabiiro badan ayaa sidoo kale kugula taliya maydhashooyin badan kaas oo lagu darayo shaambooyo gaar ah oo loogu talagalay daryeelka timaha xayawaanadan, ama, cadayashada ka dib, ku buufi xayawaanka silikoon buufis ah oo u adeega inay timaha siiyaan xoog iyo joogtayn.
Xayawaanada oo dhami waxay soo saaraan waxsoosaar iyo dufan kuwaas oo ka caawiya inay maqaarkooda, qolofyadooda, iwm ay ku hayaan xaalad qumman. Dufanadan ayaa ka mid ah qaababka maqaarka, iyaga oo siinaya adkaansho, dabacsanaan, iwm saliidaha ayaa ah dambiilayaasha ugu waaweyn ee iftiinka. Labadaba dufanka iyo saliidaha, labadaba maadooyinka dufanka leh, waxay kujiraan noocyada nafaqeeyayaalka yar yar ee nafaqada kaqaadan cuntada. Marka, haddii aan ku kobcinno cuntada faraska kuwan, waxaan ku guuleysan doonnaa dhalaalkaas badan ee la doonayo.
Cunnooyinka isku dhafan ee aan ka helno suuqa ayaa durbaba mas'uul ka ah bixinta faraska dufanka iyo saliidaha lagama maarmaanka ah, laakiin haddii aan dooneyno inaan kor u qaadno waan ku dari karnaa qaado oo saliidda cuntada ah si ay u quudiso ama loo bixiyo cuntada. Qiyaas kale waa adeegsiga kaalshiyamka iyo fosfooraska nafaqada leh, ilaa iyo inta ay ku jirto qaab isu dheellitiran iyo qiyaasaha uu kugula taliyay qof khabiir ah, haddii kale waxaan heli doonnaa saameynta tan ka soo horjeedda maadaama aan kor u qaadi doonno muuqaalka isbeddellada ku dhaca noolaha xayawaanka.
Daawooyinka guriga si aad faraska uga dhigto mid dhalaalaya
Isku darka saliida
Marka la eego dhinacan, sida ugu badan dhammaan, "macallin kastaa wuxuu leeyahay buugyaraha." Waxaan ka heli karnaa xeelado aan dhammaad lahayn oo dadku u adeegsadaan dayactirka iyo dhalaalka faraska dabadiisa iyo dabadiisa. In badan oo iyaga ka mid ahi waa gebi ahaanba guryaha lagu sameeyo iyo wax lagu sameeyo.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan, gaar ahaan kuwa u diyaariya fardahooda tartamada tartamada ama bandhigyada, waxay ku saleysan tahay a adag oo laga diyaariyey saliidaha.
Diyaarintani waxay ka kooban tahay: 10 qaado oo saliid saytuun ah, qaado qaado iyo badh oo ubax baaruud ah iyo qaaddo qaado oo ah beerka kalluunka. Labaduba waa isku dhafan yihiin, waxaana lagu marinayaa faraska si tartiib ah caday marka timaha la dhaqo. Dabcan, faraska waa in lagu hayaa meel hadh leh oo laga ilaaliyo soo-gaadhista falaadhaha cadceedda inta isku-xidhkaani gebi ahaanba qallalayo, si looga fogaado midab-doorsoon ama isbeddellada dhawaqa meelaha lagu daaweeyay.
Tufaax cider tufaax
Mid ka mid ah daawooyinka ugu caansan ee aan u shaqeyneyn oo kaliya timaha faraska, laakiin sidoo kale loo isticmaalo dhammaan noocyada xayawaanka timaha leh iyo xitaa aadanaha, waa isku darka tufaax khal iyo biyo.
Liin dhanaanta, maadama aysiidhkeedu sareeyo waxay leedahay pH sare oo ka duwan pH-ka hooseeya ee laga helo dufanka. Haddii faraskeenu leeyahay maqaar aad u saliidan oo saliid leh, halkii uu ka muuqan lahaa dhalaalaya, wuxuu ku sameyn doonaa muuqaal cake iyo wasakh ah. Ku buufinta qadar aan badnayn oo khal khal ah oo tufaax ah oo biyo ku jira waa xalka ugu waxtarka badan ee dhibaatadan.
Ha ka welwelin urta adag ee la socota khalka, tan iyo markii timuhu qallalaan, urkaan ayaa gebi ahaanba baaba'aya.
Diyaarinta saliida macdanta
Laga yaabee, cadarkan inuu yahay midka ugu adag ee la sameeyo sababo kala duwan oo ay ka kooban tahay. Si kastaba ha noqotee, dhowr bixiyeyaal ayaa sheeganaya inay shaqeyneyso, iyo inay sidoo kale u adeegaan inay ka ilaaliyaan cayayaanka iyo dulinleyda sida kaneecada.
Waxay qaadataa litir saliid macdanta ah, oo loo yaqaan meelaha qaarkood sida dareeraha batroolka ee dareeraha ah, qiyaastii 8 qaado oo saliid citronella ah, iyo qiyaastii 10 qaado oo saliid ah Terebene. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku dabaqdo oo keliya manjarka iyo dabada, oo aan lagu marin qaybaha kale ee jirka faraska.
Dhammaan tilmaamahan waxay ka caawin doonaan jaakadeena farasku inay u muuqdaan kuwo caafimaad qaba, xoog leh oo dhalaalaya, laakiin iyagu maahan kuwa keliya. Suuqa waxaa ku yaalo noocyo kala duwan oo waxtar badan leh: buufinta, jaakadaha, kareemada, iwm. Waxaan u tagi karnaa dukaan kasta ama xarun xirfadeed wixii talo ah, iyo, dabcan, dhakhtar xoolaha.
In kastoo, haddii aan dooneyno inaan iska ilaalino adeegsiga alaabta, sameynta daawooyinkeenna iyo wixii la mid ah, waa inaan ogaanno taas una nafaqo ku filan ayaa yareyn karta dhowr cilladood faraskayaga, oo ay ku jiraan kuwa bilicsanaanta. Si kastaba ha noqotee, su'aashan ugu dambeysa nadaafadda waxay qaadataa tixgelin gaar ah. Caadooyinka sida cadayashada ama dhaqista maalinlaha ah waa kuwo aad u taageera.
Waa in la ogaadaa in munaasabado badan, aan u fiirsano in cambarka iyo dabadu aysan u muuqan wax wanaagsan, wax sidoo kale laga arki karo jirka intiisa kale. Waa markaa marka ay tahay inaan sii sii eegno, oo aan ka fekerno suurtagalnimada in aan la kulanno nooc kasta oo farxad ama caabuq, gaar ahaan haddii aan qadarinno in xayawaanku si joogto ah u xoqdo ama u muujiyo calaamado dusha sare ah (nabarrada, xanaaqa, ...). Hadday sidaas tahay, ka hor inta aan laga walwalin diyaaradda bilicsanaanta, waa inaan u sameynaa mid caafimaad qabta, oo aan toos ugu tagnaa dhakhtarka xoolaha intaanan tallaabo qaadin nafteenna.
Sida loo koraan faraska
Maska faraska ayaa ka mid ah qeybaha ugu quruxda badan xayawaanka, laakiin maxaad sameysaa si aad u korto? Hagaag, waxaa jira laba ikhtiyaar:
Timaha darafyadiisa jar: tani waa sida taranka timaha loo kiciyo, iyadoo lagu gaarayo koritaan wanaagsan.
Iyadoo biotin: waa fiitamiin (H) ah in fardaha loo isticmaalo si sax ah jaakadda qaab shaambo ama budo ah. Waxa kale oo aad heli doontaa quudin ay ka mid yihiin fiitamiinkan.
Xagee laga iibsadaa faraska dhogorta
Waad iibsan kartaa timo jare dukaamada wax soo saarka ee xayawaankan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Fardo » Xeryaha » Tabaha lagu sameeyo faraska maankiisa oo ifaya
Immisa ayey ku kacaysaa in faras la ilaaliyo bishiiba